မိခငျဆီကနေ သမီးတှမှော အမှဆေကျခံရနိုငျတဲ့ မြိုးရိုးလိုကျရောဂါ ၁၀ခု - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty မိခငျဆီကနေ သမီးတှမှော အမှဆေကျခံရနိုငျတဲ့ မြိုးရိုးလိုကျရောဂါ ၁၀ခု
မိခငျဆီကနေ သမီးတှမှော အမှဆေကျခံရနိုငျတဲ့ မြိုးရိုးလိုကျရောဂါ ၁၀ခု
ကြှနျုပျတို့ရဲ့ဗီဇဟာ ကြှနျုပျတို့ရဲ့ ရုပျဆငျးသဏ်ဍာနျနှငျ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေးကိုသာ သတျမှတျတာမဟုတျဘဲ ကြှနျုပျတို့ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အားနညျးခကျြမြားကိုလညျး သတျမှတျပေးပါတယျ ။ ဥပမာမိဘမှာဆီးခြို/သှေးခြိုရောဂါရှိရငျ သားသမီးမှာ မြိုးရိုးလိုကျဖွဈတတျတာမြိုး ဖွဈပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးမှာ သမီးတဈယောကျဟာ မိခငျဆီကနေ အမှရေနိုငျတဲ့ မြိုးဗီဇခြို့ယှငျးမှု အကွောငျးကို မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။ မြိုးရိုးလိုကျတာဟာ သငျ့ရဲ့ကနျြးမာရေးကို ပိုပွီးဂရုစိုကျဖို့ လိုအပျကွောငျး သတိပေးတာ ဖွဈပမေယျ့ မလှဲမရှောငျနမေကောငျးဖွဈလိမျ့မယျလို့ မဆိုလိုပါဘူး။
အရိုးပှရောဂါဟာ အရိုးကြိုးခွငျးအန်တရာယျကို တိုးပှားစတေဲ့ အရိုးအားနညျးတဲ့ ရောဂါတဈခုဖွဈပါတယျ။ အမြားအားဖွငျ့ မိခငျဖွဈသူဟာ အရိုးပှရောဂါဖွဈပွီး အရိုးကြိုးဖူးတယျဆိုရငျ သမီးဖွဈသူမှာလညျး မြိုးရိုးလိုကျတတျပါတယျ။ အရိုးပှရောဂါဟာ အရိုးမှာ ကယျလစီယမျ ဆုံးရှုံးပွီး အရိုးပကျြစီးလှယျလာတဲ့ကာလဖွဈတဲ့ သှေးဆုံးပွီးနောကျမှာ အဖွဈမြားပါတယျ။
ကယျလစီယမျကွှယျဝတဲ့ အစားအစာမြားကို ပိုစားသငျ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကယျလစီယမျဟာ ဗီတာမငျဒီနဲ့ ပေါငျးစပျတဲ့အခါမှသာ သငျ့ခန်ဓာကိုယျက စုပျယူနိုငျတယျဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့။ သငျ့ရဲ့ကုထုံးပညာရှငျတှနေဲ့ တိုငျပငျပွီး လိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျ ဖွညျ့စှကျစာ ညှနျကွားဖို့ မေးပါ။ ဒါ့အပွငျ မကွာခဏ အပွငျထှကျပွီး လမျးလြှောကျပါ။
ဆေးလိပျမသောကျပါနဲ့။ ဒီအကငျြ့ဆိုးက အရိုးသိပျသညျးဆလှမျးမိုးမှုနှငျ့ ကယျလစီယမျစုပျယူဖို့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို လြော့ကစြပေါတယျ။
ဆိုဒါမသောကျပါနဲ့ ။ ဆိုဒါပုံမှနျသောကျသုံးခွငျးက တငျပါးဆုံးရိုးကြိုးမှုအန်တရာယျကို ၁၄%တိုးစပေါတယျ။
သငျ့ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျကို ထိနျးခြုပျပွီး အားကစားလုပျပါ။ 19နှငျ့ 64နှဈကွားလူတှဟော ပုခုံးအတှကျ တဈပတျကို 2ကွိမျ၊ ခွထေောကျ၊ တငျပါး၊နောကျကြော၊ ရငျဘကျ၊ လကျမောငျးအတှကျ ကွှကျသားတညျဆောကျမှုလကေ့ငျြ့ခနျးအဖွဈ အပတျစဉျ အရေိုးဗဈလှုပျရှားမှု 150မိနဈခနျ့လုပျပေးဖို့ အကွံပွုပါတယျ။
သှေးလေးဖကျနာရောဂါ ဖွဈပှားရတဲ့ အကွောငျးရငျးကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျးမသိရပမေယျ့ သိပ်ပံပညာရှငျမြားက မြိုးဗီဇနှငျ့ လူတဈဦးရဲ့ကိုယျခံအားစနဈကို သကျရောကျစတေဲ့ ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ အကွောငျးရငျးတို့ ပေါငျးစပျ ပါဝငျတာကွောငျ့လို့ အကွံပွုထားပါတယျ။
ဆေးလိပျဖွတျပွီး အနီရောငျအသား၊ ကျောဖီသောကျသုံးခွငျး လြှော့ခပြေးပါ။
သငျ့သှားနဲ့ သှားဖုံးတှကေို သသေခြောခြာဂရုစိုကျပါ။ သှားဆရာဝနျဆီသှားပွီး သှားပုံမှနျစဈဆေးမှု ပွုလုပျပါ။
Periodontal ရောဂါက သှေးလေးဖကျနာဖှံ့ဖွိုးမှုကို ဦးတညျနိုငျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့အစားအသောကျထဲမှာ ဗီတာမငျစီကွှယျဝတဲ့ အစားအစာမြားကို ထညျ့သှငျးပါ။ ဒီအငျတီအောကျဆီဒငျ့က သငျ့ခန်ဓာကိုယျမှာ ရောငျရမျးမှုအန်တရာယျကို လြော့ကစြပေါတယျ။
၃။ အရှယျမတိုငျခငျ အိုမငျးခွငျး
သိပ်ပံပညာရှငျမြားက အခြို့သောမြိုးဗီဇဟာ ကြှနျတျောတို့ခန်ဓာကိုယျမှာ အိုမငျးခွငျးဖွဈစဉျကို ဘယျလောကျကွာကွာ တားဆီးနိုငျဖို့အတှကျ တာဝနျရှိတယျဆိုတာကို ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ ဒီမြိုးဗီဇဟာ မိခငျရဲ့ဘကျကနေ မြိုးဆကျတဈဆကျမှ တဈဆကျသို့ ကူးစကျပါတယျ။ သငျဟာ သငျ့အမရေဲ့ပကျြစီးသှားသော DNAကို အမှခေံရလြှငျ သငျ့ရဲ့အိုမငျးခွငျးဖွဈစဉျက ပိုမွနျလာပါလိမျ့မယျ။ ကာကှယျဖို့ကတော့ နရေောငျထဲထှကျတဲ့အခါ SPF မွငျ့မားတဲ့ နရေောငျကာကှယျဆေးကို သုံးဖို့လိုပါတယျ။
လူဦးရသေနျး ၃၀၀လောကျက နှဈစဉျနှဈတိုငျး စိတျကရြောဂါခံစားနကွေရပါတယျ။ မြိုးရိုးလိုကျနိုငျပွီး စိတျကရြောဂါအတှကျ တာဝနျရှိတဲ့ မြိုးဗီဇ Slc6a15ကို သိပ်ပံပညာရှငျမြားက ရှာဖှတှေရှေိ့နိုငျခဲ့ပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှဟော အမြိုးသားထကျ စိတျကရြောဂါခံစားရဖို့ နှဈဆပိုမြားပါတယျ။ ဒါက နာတာရှညျရောဂါတဈခုတောငျ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ . Postpartum depression (ကလေးမှေးဖှားပွီးဖွဈတဲ့ စိတျကရြောဂါ)ကလညျး မြိုးရိုးလိုကျစနေိုငျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအဆငျ့ကို ဂရုစိုကျပါ။ ကောငျးကောငျးအိပျဖို့လိုပွီး ကောငျးမှနျမြှတတဲ့ အစားအစာ စားဖို့ လိုပါတယျ။ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှု ပုံမှနျပွုလုပျပေးဖို့ လိုပါတယျ။
သငျ့ရဲ့အတှငျးပွဿနာတှကေို မွိုသိပျမထားပါနဲ့။ သငျ့သူငယျခငျြးတှေ၊ မိသားစုတှကေို အကူအညီတောငျးနိုငျပါတယျ။ တခါတရံ တဈယောကျယောကျနဲ့ စကားပွောဖို့လိုပါတယျ။
သငျ့ရဲ့အခွအေနဟော ပိုဆိုးလာတယျလို့ ခံစားနရေလြှငျ စိတျရောဂါကုဆရာဝနျဆီ သှားဖို့မရှကျပါနဲ့။
ဒီရောဂါဟာ မြိုးရိုးလိုကျတာနဲ့ ဆကျစပျနပွေီး အမြိုးသမီးတှဟော အမြိုးသားတှထေကျ ပိုပွီး ရတေိမျဖွဈတတျပါတယျ။
ကွိုတငျစဈဆေးမှု ပွုလုပျပါ။ အသကျ ၄၀မတိုငျခငျ (၂နှဈ- ၄နှဈတိုငျး) ၊ အသကျ၄၀ကနေ ၅၄နှဈအထိ (၁နှဈ- ၃နှဈတိုငျး)၊ အသကျ ၅၅နှဈမှ ၆၄နှဈအထိဆိုရငျ (၁နှဈ- ၂နှဈတိုငျး)၊ အသကျ ၆၅နှဈပွညျ့ပွီးရငျ (၆လ- ၁၂လတိုငျး) မကျြစိဆရာဝနျနှငျ့ စမျးသပျဖို့ လိုပါတယျ။ တဈပတျကို ၃ကွိမျ ရှရှပွေးခွငျး သို့မဟုတျလမျးလြှောကျခွငျးကဲ့သို့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပေးနိုငျသျောလညျး လညျပငျးနှငျ့ ပခုံးတှကေို တငျးမာစနေိုငျတဲ့ upside down poses ပွုလုပျခွငျးကို ရှောငျရှားပါ။
နှလုံးသှေးကွောဆိုငျရာရောဂါမြားကလညျး မိခငျကနေ သမီးဆီသို့ မြိုးရိုးလိုကျတတျပါတယျ။
အဝလှနျခွငျးက လသေငျတုနျးဖွတျခွငျး၊ heart attack၊ သှေးတိုးခွငျးနှငျ့ ဆီးခြိုရောဂါရှိခွငျး အန်တရာယျကို တိုးစပေါတယျ။ သငျ့တျောမယျ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုလကေ့ငျြ့ခနျးကို ရှာဖှပွေီး တဈပတျကို ၃-၄ကွိမျ ပွုလုပျပါ။
အခြို၊ အငနျနှငျ့ အဆီမြားတဲ့ အစားအသောကျတှေ စားသုံးခွငျးကို စီစဈပွီး အသီးအနှံ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို ပိုပွီးစားပါ။
ဆေးလိပျဖွတျခွငျးက နှလုံးသှေးကွောဆိုငျရာရောဂါမြားအန်တရာယျကို လြော့ခပြေးပါလိမျ့မယျ။
ပုံမှနျcheck-upsလုပျပွီး ကိုလကျစထရောနှငျ့ arterial pressure အဆငျ့ကို ထိနျးသိမျးပါ။
အမြိုးသမီးတှဟော အမြိုးသားတှထေကျ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျရောဂါကို ၃ဆပိုပွီး ခံစားရပါတယျ။ ဒီရောဂါဟာ မြိုးရိုးလိုကျနိုငျပမေယျ့ ခေါငျးကိုကျမှုအရအေတှကျနှငျ့ အခွအေနကေို လြှော့ခလြို့ရပါတယျ။
အရကျ၊ ခြောကလကျ၊ ဒိနျခဲ၊ ကျောဖီနဲ့ အခဉျြဓါတျပါတဲ့အသီး စားသုံးမှုကို လြှော့ခပြါ။ ဒီအစားအစာမြားက ခေါငျးတခွမျးကိုကျမှုကို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
အနံ့ပွငျးပွီး အလငျးရောငျစူးရှတဲ့နရောတှကေို ရှောငျရှားဖို့ ကွိုးစားပါ။
နတေို့ငျး အပနျးဖွခွေငျးနှငျ့ အနားယူဖို့ အခြိနျပေးပါ။
သိပ်ပံပညာရှငျမြားက အိပျမပြျောခွငျးဟာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ပွဿနာမြားကွောငျ့သာ ဖွဈပှားနိုငျတာမဟုတျဘဲ မြိုးရိုးလိုကျတာကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျတယျလို့ တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ စိတျကရြောဂါ၊ စိုးရိမျစိတျပုံမှနျမဟုတျခွငျးနှငျ့ neuroticism ကဲ့သို့သော တခွားလက်ခဏာမြားနှငျ့အတူ မြိုးဗီဇဟာ တဈထပျတညျးဖွဈတာကို တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။
စိတျထဲမှာ မကောငျးတဲ့အတှေးတှနေဲ့အတူ အိပျရာမဝငျပါနဲ့။
အိပျပြျောအောငျ ကွိုးစားပွီး နတေို့ငျးအခြိနျမှနျ အိပျရာကထပါ။
အယျလျဇိုငျးမားရောဂါဟာ အမြိုးသားထကျ အမြိုးသမီးတှမှော ပိုဖွဈပွီး မှတျဉာဏျခြို့ယှငျးခွငျးရဲ့ အဖွဈအမြားဆုံးပုံစံဖွဈပါတယျ။ ဒီရောဂါဟာ ပြောကျကငျးမှုမရှိပမေယျ့ ကနျြးမာတဲ့လူနမှေုဘဝမှာ နထေိုငျရငျ ဒီရောဂါဖွဈမှု အန်တရာယျကို လြော့ခနြိုငျပါတယျ။
သှေးတိုးနှငျ့ ကိုလကျစထရောအဆငျ့ကို ထိနျးခြုပျပါ။
ဆေးလိပျသောကျခွငျးက မှတျဉာဏျခြို့တဲ့ခွငျးအန်တရာယျကို တိုးပှားစတောကွောငျ့ ဆေးလိပျဖွတျပါ။
အားကစားလုပျပါ။ သကွားနှငျ့ ပွညျ့ဝဆီစားသုံးမှုကို ကနျ့သတျပွီး သဈသီးမြားနှငျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားကို ပိုစားပါ။
၁၀။ ရငျသားကငျဆာနဲ့ သားအိမျကငျဆာ
2013 ခုနှဈမှာ နာမညျကွီးမငျးသမီး အိနျဂလြီနာဂြိုလီဟာ မြိုးဗီဇစဈဆေးမှု စမျးသပျခံယူခဲ့ပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှမှော ဖွဈပှားလရှေိ့တဲ့ ရငျသားနှငျ့ သားအိမျကငျဆာကိုတငျကာကှယျရေးအတှကျ စမျးသပျစဈဆေးခွငျးဖွဈပပါတယျ။ သူမရဲ့နှဈစဉျစမျးသပျမှုရလဒျက အစောပိုငျးသားအိမျကငျဆာ ဖွဈနိုငျခွေ လက်ခဏာကို ညှနျပွခဲပွီးပွီးနောကျ ကွိုတငျကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ သူမရဲ့ရငျသားနဲ့ သားအိမျကို ခှဲစိတျဖယျရှားခဲ့ပါတယျ။ သူမရဲ့မိခငျနဲ့ အဖှားဟာ ယခငျက ကငျဆာရောဂါနဲ့ ကှယျလှနျခဲ့တာကွောငျ့ ကငျဆာရောဂါအန်တရာယျကို လြော့ခဖြို့ ဒါကိုပွုလုပျခဲ့တာပါ။ ဂြိုလီမှာ ရငျသားနှငျ့ သားအိမျကငျဆာ ဖွဈနိုငျခွကေို တိုးပှားစတေဲ့ BACA1 မြိုးဗီဇ ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သိပ်ပံပညာရှငျမြားက ဗီဇပွောငျးလဲမှုအားလုံးက ကငျဆာကိုဦးတညျနတော မဟုတျတာကွောငျ့ သငျဟာ ပွငျးထနျတဲ့ ကွိုတငျကာကှယျဆောငျရှကျမှုတှေ လုပျဆောငျဖို့ မလိုဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
အသကျ ၃၀မှာ ကလေးယူပါ။ အသကျ၃၀မှာ ပထမကလေးကို မှေးဖှားခွငျးက ရငျသားကငျဆာအန်တရာယျကို လြော့ကစြတေယျလို့ လလေ့ာမှုမှာ အကွံပွုထားပါတယျ။
ပုံမှနျ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှု ပွုလုပျပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဗီဇဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန်နှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုသာ သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အားနည်းချက်များကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးပါတယ် ။ ဥပမာမိဘမှာဆီးချို/သွေးချိုရောဂါရှိရင် သားသမီးမှာ မျိုးရိုးလိုက်ဖြစ်တတ်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ သမီးတစ်ယောက်ဟာ မိခင်ဆီကနေ အမွေရနိုင်တဲ့ မျိုးဗီဇချို့ယွင်းမှု အကြောင်းကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ မျိုးရိုးလိုက်တာဟာ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ပိုပြီးဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း သတိပေးတာ ဖြစ်ပေမယ့် မလွှဲမရှောင်နေမကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။
အရိုးပွရောဂါဟာ အရိုးကျိုးခြင်းအန္တရာယ်ကို တိုးပွားစေတဲ့ အရိုးအားနည်းတဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူဟာ အရိုးပွရောဂါဖြစ်ပြီး အရိုးကျိုးဖူးတယ်ဆိုရင် သမီးဖြစ်သူမှာလည်း မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။ အရိုးပွရောဂါဟာ အရိုးမှာ ကယ်လစီယမ် ဆုံးရှုံးပြီး အရိုးပျက်စီးလွယ်လာတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ သွေးဆုံးပြီးနောက်မှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ကယ်လစီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများကို ပိုစားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကယ်လစီယမ်ဟာ ဗီတာမင်ဒီနဲ့ ပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှသာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က စုပ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ သင့်ရဲ့ကုထုံးပညာရှင်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် ဖြည့်စွက်စာ ညွှန်ကြားဖို့ မေးပါ။ ဒါ့အပြင် မကြာခဏ အပြင်ထွက်ပြီး လမ်းလျှောက်ပါ။
ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့။ ဒီအကျင့်ဆိုးက အရိုးသိပ်သည်းဆလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ကယ်လစီယမ်စုပ်ယူဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ဆိုဒါမသောက်ပါနဲ့ ။ ဆိုဒါပုံမှန်သောက်သုံးခြင်းက တင်ပါးဆုံးရိုးကျိုးမှုအန္တရာယ်ကို ၁၄%တိုးစေပါတယ်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး အားကစားလုပ်ပါ။ 19နှင့် 64နှစ်ကြားလူတွေဟာ ပုခုံးအတွက် တစ်ပတ်ကို 2ကြိမ်၊ ခြေထောက်၊ တင်ပါး၊နောက်ကျော၊ ရင်ဘက်၊ လက်မောင်းအတွက် ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုလေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ် အပတ်စဉ် အေရိုးဗစ်လှုပ်ရှားမှု 150မိနစ်ခန့်လုပ်ပေးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
သွေးလေးဖက်နာရောဂါ ဖြစ်ပွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်များက မျိုးဗီဇနှင့် လူတစ်ဦးရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို သက်ရောက်စေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းတို့ ပေါင်းစပ် ပါဝင်တာကြောင့်လို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီး အနီရောင်အသား၊ ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်း လျှော့ချပေးပါ။
သင့်သွားနဲ့ သွားဖုံးတွေကို သေသေချာချာဂရုစိုက်ပါ။ သွားဆရာဝန်ဆီသွားပြီး သွားပုံမှန်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပါ။
Periodontal ရောဂါက သွေးလေးဖက်နာဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အစားအသောက်ထဲမှာ ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများကို ထည့်သွင်းပါ။ ဒီအင်တီအောက်ဆီဒင့်က သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရောင်ရမ်းမှုအန္တရာယ်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။
၃။ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းခြင်း
သိပ္ပံပညာရှင်များက အချို့သောမျိုးဗီဇဟာ ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက် တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီမျိုးဗီဇဟာ မိခင်ရဲ့ဘက်ကနေ မျိုးဆက်တစ်ဆက်မှ တစ်ဆက်သို့ ကူးစက်ပါတယ်။ သင်ဟာ သင့်အမေရဲ့ပျက်စီးသွားသော DNAကို အမွေခံရလျှင် သင့်ရဲ့အိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်က ပိုမြန်လာပါလိမ့်မယ်။ ကာကွယ်ဖို့ကတော့ နေရောင်ထဲထွက်တဲ့အခါ SPF မြင့်မားတဲ့ နေရောင်ကာကွယ်ဆေးကို သုံးဖို့လိုပါတယ်။
လူဦးရေသန်း ၃၀၀လောက်က နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း စိတ်ကျရောဂါခံစားနေကြရပါတယ်။ မျိုးရိုးလိုက်နိုင်ပြီး စိတ်ကျရောဂါအတွက် တာဝန်ရှိတဲ့ မျိုးဗီဇ Slc6a15ကို သိပ္ပံပညာရှင်များက ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားထက် စိတ်ကျရောဂါခံစားရဖို့ နှစ်ဆပိုများပါတယ်။ ဒါက နာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုတောင် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ . Postpartum depression (ကလေးမွေးဖွားပြီးဖြစ်တဲ့ စိတ်ကျရောဂါ)ကလည်း မျိုးရိုးလိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်ကို ဂရုစိုက်ပါ။ ကောင်းကောင်းအိပ်ဖို့လိုပြီး ကောင်းမွန်မျှတတဲ့ အစားအစာ စားဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
သင့်ရဲ့အတွင်းပြဿနာတွေကို မြိုသိပ်မထားပါနဲ့။ သင့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေကို အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖို့လိုပါတယ်။
သင့်ရဲ့အခြေအနေဟာ ပိုဆိုးလာတယ်လို့ ခံစားနေရလျှင် စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်ဆီ သွားဖို့မရှက်ပါနဲ့။
ဒီရောဂါဟာ မျိုးရိုးလိုက်တာနဲ့ ဆက်စပ်နေပြီး အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် ပိုပြီး ရေတိမ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကြိုတင်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပါ။ အသက် ၄၀မတိုင်ခင် (၂နှစ်- ၄နှစ်တိုင်း) ၊ အသက်၄၀ကနေ ၅၄နှစ်အထိ (၁နှစ်- ၃နှစ်တိုင်း)၊ အသက် ၅၅နှစ်မှ ၆၄နှစ်အထိဆိုရင် (၁နှစ်- ၂နှစ်တိုင်း)၊ အသက် ၆၅နှစ်ပြည့်ပြီးရင် (၆လ- ၁၂လတိုင်း) မျက်စိဆရာဝန်နှင့် စမ်းသပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို ၃ကြိမ် ရွရွပြေးခြင်း သို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ခြင်းကဲ့သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးနိုင်သော်လည်း လည်ပင်းနှင့် ပခုံးတွေကို တင်းမာစေနိုင်တဲ့ upside down poses ပြုလုပ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကလည်း မိခင်ကနေ သမီးဆီသို့ မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းက လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း၊ heart attack၊ သွေးတိုးခြင်းနှင့် ဆီးချိုရောဂါရှိခြင်း အန္တရာယ်ကို တိုးစေပါတယ်။ သင့်တော်မယ့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းကို ရှာဖွေပြီး တစ်ပတ်ကို ၃-၄ကြိမ် ပြုလုပ်ပါ။
အချို၊ အငန်နှင့် အဆီများတဲ့ အစားအသောက်တွေ စားသုံးခြင်းကို စီစစ်ပြီး အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ပိုပြီးစားပါ။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းက နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများအန္တရာယ်ကို လျော့ချပေးပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှန်check-upsလုပ်ပြီး ကိုလက်စထရောနှင့် arterial pressure အဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။
အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါကို ၃ဆပိုပြီး ခံစားရပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ မျိုးရိုးလိုက်နိုင်ပေမယ့် ခေါင်းကိုက်မှုအရေအတွက်နှင့် အခြေအနေကို လျှော့ချလို့ရပါတယ်။
အရက်၊ ချောကလက်၊ ဒိန်ခဲ၊ ကော်ဖီနဲ့ အချဉ်ဓါတ်ပါတဲ့အသီး စားသုံးမှုကို လျှော့ချပါ။ ဒီအစားအစာများက ခေါင်းတခြမ်းကိုက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အနံ့ပြင်းပြီး အလင်းရောင်စူးရှတဲ့နေရာတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ ကြိုးစားပါ။
နေ့တိုင်း အပန်းဖြေခြင်းနှင့် အနားယူဖို့ အချိန်ပေးပါ။
သိပ္ပံပညာရှင်များက အိပ်မပျော်ခြင်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကြောင့်သာ ဖြစ်ပွားနိုင်တာမဟုတ်ဘဲ မျိုးရိုးလိုက်တာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်စိတ်ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းနှင့် neuroticism ကဲ့သို့သော တခြားလက္ခဏာများနှင့်အတူ မျိုးဗီဇဟာ တစ်ထပ်တည်းဖြစ်တာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ထဲမှာ မကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့အတူ အိပ်ရာမဝင်ပါနဲ့။
အိပ်ပျော်အောင် ကြိုးစားပြီး နေ့တိုင်းအချိန်မှန် အိပ်ရာကထပါ။
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဟာ အမျိုးသားထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်ပြီး မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်းရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ ပျောက်ကင်းမှုမရှိပေမယ့် ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုဘဝမှာ နေထိုင်ရင် ဒီရောဂါဖြစ်မှု အန္တရာယ်ကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်။
သွေးတိုးနှင့် ကိုလက်စထရောအဆင့်ကို ထိန်းချုပ်ပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက မှတ်ဉာဏ်ချို့တဲ့ခြင်းအန္တရာယ်ကို တိုးပွားစေတာကြောင့် ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။
အားကစားလုပ်ပါ။ သကြားနှင့် ပြည့်ဝဆီစားသုံးမှုကို ကန့်သတ်ပြီး သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ပိုစားပါ။
၁၀။ ရင်သားကင်ဆာနဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာ
2013 ခုနှစ်မှာ နာမည်ကြီးမင်းသမီး အိန်ဂျလီနာဂျိုလီဟာ မျိုးဗီဇစစ်ဆေးမှု စမ်းသပ်ခံယူခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့ ရင်သားနှင့် သားအိမ်ကင်ဆာကိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပပါတယ်။ သူမရဲ့နှစ်စဉ်စမ်းသပ်မှုရလဒ်က အစောပိုင်းသားအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ လက္ခဏာကို ညွန်ပြခဲပြီးပြီးနောက် ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ သူမရဲ့ရင်သားနဲ့ သားအိမ်ကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့မိခင်နဲ့ အဖွားဟာ ယခင်က ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တာကြောင့် ကင်ဆာရောဂါအန္တရာယ်ကို လျော့ချဖို့ ဒါကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဂျိုလီမှာ ရင်သားနှင့် သားအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးပွားစေတဲ့ BACA1 မျိုးဗီဇ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်များက ဗီဇပြောင်းလဲမှုအားလုံးက ကင်ဆာကိုဦးတည်နေတာ မဟုတ်တာကြောင့် သင်ဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ မလိုဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အသက် ၃၀မှာ ကလေးယူပါ။ အသက်၃၀မှာ ပထမကလေးကို မွေးဖွားခြင်းက ရင်သားကင်ဆာအန္တရာယ်ကို လျော့ကျစေတယ်လို့ လေ့လာမှုမှာ အကြံပြုထားပါတယ်။
ပုံမှန် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပါ။
Previous articleတင်းပါးကြွက်သားတင်းရင်းလှပစေဖို့ အပ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်နဲ့ ကုသလိုက်တဲ့ မင်းသမီး Marcela Iglesias
Next articleရေခဲတောင်ပေါ်က ၅၉နှစ်ကြာမှ ပြန်လည်ဆယ်ယူရတဲ့ တောင်တက်သမား အလောင်း